Gaadiid ay wateen Saraakiil ka tirsan Al-shabaab oo lagu weeraray Shabeelaha Hoose | Jubbaland Media Online
Gaadiid ay wateen Saraakiil ka tirsan Al-shabaab oo lagu weeraray Shabeelaha Hoose
Posted on July 3, 2017 in Feat, Wararka // 0 Comments
Wararka ay shabakadda Jubaland Media ka heleeyso gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sheegaya in diyaarado noocoodu yahay kuwa aan duuliyaha lahayn ay duqeeyeen gaadiid ay wateen masuuliyiin ka tirsan Al-shabaab oo marayay nawaaxiga deegaanka Kuunyabaroow ee gobolka Sh/hoose.
Sida ay Jubaland Media u sheegeen ilo xog ogaal ah, gaari nooca Mini-Buska ah oo aan la xaqiijin in ay Shabaab wateen amaba in uu ahaa gaari shacab iyo gaari kale oo nooca raaxada oo la sheegay in uu lahaa gudoomiyaha Al-shabaab u qaabilsan gobolka Sh/hoose ayaa la sheegay in shalay gelinkii danbe la duqeeyay, wallow aan la ogeyn in gudoomiyuhu saarnaa xilligii ay duqeyntu dhaceeysay.
Xiriiro kala duwan oo ay Shabakadda Jubaland Media la sameeysay shacabka ku dhaqan deegaanada ku dhow dhow halka uu weerarku ka dhacay ayay inoo suurogali weeysay in ay wax xog rasmi ah a helno, maadaama goobta weerarku ka dhacay ay ka fogeyd tuulada Kuunyabaroow.
Dagaalyahanno ka tirsan Al-shabaab ayaa la sheegay in ay gaareen halka uu weerarku ka dhacay.
Gudoomiyaha Al-shabaab ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaa lagu magacaabaa Max’ed Sahal Iidle, waxaana xilal kala duwan uu kasoo qabtay Al-shabaab mudadii uu ka tirsanaa, isagoo xilligi ay Shabaab gacanta u heeysay Kismaayo soo noqday ku xigeenka xafiiska amniga gobolka J/hoose ee kooxdaasi.